Pfalzweyer, Grand Est, France
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLeslie
Ihlaziywe, igcisa kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo yi-70m² iflethi kwi-Northern Vosges Park, enendawo yokuhlala yabucala yekofu yasekuseni kunye negadi engasemva yegadi yee-BBQs. Jonga iindlela zehlathi ngeenyawo / ngebhayisekile okanye iRoute des Vins edumileyo, emva koko ubuyele kwilizwe lakho elipholileyo: isitovu somthi, iincwadi, imidlalo, i-smart TV/WiFi, izixhobo zabantu okanye iingoma zakho kwisithethi seBluetooth esinikiweyo. Ipaki yasimahla. Fumanisa ukutya kwengingqi, amabhodlo aphakathi, iidolophu ezinembali, iindawo ezinomtsalane zenkcubeko nosapho- iimarike zeKrisimesi...
Indawo yokuhlala inomnyango ozimeleyo kwaye ibekwe kumgangatho ophantsi wendlu yethu. Iintsimbi zecawa yasezilalini ziya kukusa kwelinye ixesha njengoko uxabisa igadi yeentyatyambo kunye nokusetwa kwelizwe ukusuka kwindawo yakho yangaphandle okanye kwigadi engasemva kwegadi, ekhoyo kwii-BBQs kunye neejam zomculo. Buza abantu balapha malunga nomthi wembali kunye nembali welinden obekwe ecaleni komlilo wenkampu- kukho ibali ngasemva kwezinto ezininzi ozifumana eLinden naseBluegrass! Kukho ithuba lokupaka ngokukhululekileyo iimoto ezininzi okanye ikhaya lemoto kwindawo.
Ifulethi lihonjiswe ngezinto zehlabathi kunye nezobugcisa; izinto zakudala zenkcubeko nezembali ezivela eAlsace kunye nobugcisa bendawo buhombisa iindonga, kodwa nezinto ezivela eAsia, eAfrika, naseMntla Melika ziyaziswa. Ngendawo yethu yokufunda ezaliswe ziincwadi zesiNgesi, isiFrentshi kunye nesiJamani, kunye nodonga lwethu lomculo oluxhotyiswe ngezixhobo ezineentambo ezintlanu, abantu abadala kunye nabantwana banokulula ngelixa bengekho. Fumanisa umculo webluegrass wemveli kunye nowangoku waseMelika kuludwe lwethu lokudlalayo olwenzelweyo!
Kwincasa yakho yencasa, iinyosi kunye nemithi yama-apile ikubonelela ngeemveliso zazo ukuba uzithenge - ubusi obufunyenwe ekuhlaleni kunye nejusi yeapile, unyaka wonke. Amanzi ethu nawo aphuma entabeni...ngoko, amnandi.
Ikhitshi lixhotyiswe ngefriji-ifriji, i-oveni, isitovu segesi kunye nemicrowave. Emva kokutyelela iimarike zeKrisimesi kwiidolophana ezikufutshane, khawucinge ukonwabela isidlo esimnandi sendabuko esifana ne-raclette okanye i-fondue usebenzisa oomatshini ababonelelweyo, kwitafile ejikelezayo yesihlanu (isihlalo se-Stokke tripp trapp sinikezelwe). Kukwakho netoaster, iketile, umatshini wekofu weCuisinart kunye nomatshini weNespresso (ikofu, icreamer, iicapsules, iti, iswekile, ifakiwe).
Xa uvuka, umbono onemibala uya kukubulisa ngefestile enkulu yegumbi lokulala unika enye igadi. Eli gumbi likunika amava awodwa kunye namaxesha aphakathi kunye neendonga zelitye lentlabathi eziveziweyo, iilinen ezicikizekileyo ezenziwe kwingingqi yentaba yaseVosges, kunye nebhedi eyenziwe ngamaplanga (140x190). Iwodrophu yesiNtu kunye nesinxibo sezinto zakho kunye nebhodi yoku-ayina kunye nebhedi yomntwana zikwanakho.
Igumbi lokuhlala elijonge ngasezantsi kunye nesitofu somlilo, libonelela iindwendwe nge-sofa-double bed conversion option, exhotywe ngamashiti kunye nemithwalo. Kunye nekona yokufunda, enkulu ye-Sony TV (i-Netflix, i-Disney +, i-ARTE, kunye ne-Amazon Prime ekhoyo) kunye nezixhobo zabantu be-bluegrass, uya kufumana isithethi seBluetooth esikumgangatho ophezulu wokusetyenziswa kwakho.
Igumbi lokuhlambela lineshawa ehlengahlengiswayo kunye nomatshini wokuhlamba. Iitawuli, indawo yokubeka itawuli, indawo yokomisa, ishampu, isepha, kunye nekiti yoncedo lokuqala zibonelelwa.
46" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix
Ukutya, kukho izinto ezininzi ezinokwenzeka ngeenxa zonke. Abathandi bokutya baya kuyixabisa ivenkile yokutyela iVieux Moulin eGraufthal ebonelela ngokupheka ekhaya lokwenyani ngeemveliso ezintsha zalapha ekhaya. Kwi-Alsatian tarte flambée edumileyo, kukho intabalala yokukhetha kulo mmandla: L'Eselbahn ukuya eHangviller, Au Grès du Marché eLa Petite Pierre, Le Bistrot Gare Café eSiewiller...
Le ndlu ikwindawo ekhenketha kakhulu: kubakhenkethi bembali, kukho iindawo zamaRoma kunye nezenkolo zezakudala kunye nokufakelwa komkhosi. Kubathandi bezemidlalo, iindlela eziphawulwe kakuhle zeClub Vosgien ziyafikeleleka kubakhweli, abakhweli beebhayisikile kunye nabatyibiliki belizwe. Nkqu abathandi beentaka banokubukela baze bachonge uninzi lobuhle obubhabhayo, kuquka isithandwa sethu sasekuhlaleni, ingwamza! (ibinoculars kunye neencwadi zesikhokelo zinikezelwe)
Uya kufumana iindawo ezahlukeneyo ezikufuphi ukuze uchithe iintsuku zakho: Le pays des étangs de Moselle kunye neziko layo lezempilo kunye namachibi amaninzi ajikeleze iMittersheim, ipaki yezilwanyana entle yaseSainte-Croix, iZiko leParc yamanzi kunye nepaki yendalo, iSaarland Therme (yejacuzzi, abathandi be-hammam kunye ne-saunas), ibala legalufa laseSarrebourg, i-Phalsbourg karting, kwaye ngokuqinisekileyo IBALULEKILE I-Europa Park!!
Kubantwana, ilali inebala elitsha lokudlala kunye nebala lebhola yomnyazi (ibhola ekhoyo). Imizuzu emithathu kude kukho inkundla yentenetya (iirakhi kunye neebhola zinikezelwe).
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pfalzweyer